Andrefadrano, Amboasary: nofanina ny mpampianatra 210 amin’ny CEG | NewsMada
Andrefadrano, Amboasary: nofanina ny mpampianatra 210 amin’ny CEG
Nahazo efitrano fianarana efatra vaovao mahazaka rivodoza ao amin’ny CEG Andrefadrano, Ambosary Atsimo, tao anatin’ny tetikasa fanatsarana ny fanabeazana tohanan’ny Koica nanomboka ny taona 2017. « Teo aloha, mindrana efitrano any amin’ny EPP na ny kaominina na ny fiangonana ny tomponandraikitry ny fanabeazana fa tsy ampy ny efitrano afaka mandray mpianatra », hoy ny talen’ny CEG Andrefadrano, i Tirindraza Jean Jacques.
Mandeha an-tongotra 3 km ka hatramin’ny 6 km ny mpianatra mamonjy fampianarana isan’andro, tsizarizary anefa ny sakafo miala any an-trano noho ny haintany mamely ny fambolena sy ny fiompiana. « Sahirana rahateo ny ray aman-dreny ka ny saran’ny fisoratana anarana 19 000 Ar aza, matetika, tsy voaloan’izy ireo akory », hoy ny talen’ny CEG.
Rehefa vita ny trano fianarana niaraka amin’ny latabatra sy ny seza, tsara kokoa ny tontolo handraisana ny mpianatra izay mavitrika tokoa. 27 ny mpanabe izay monina any Amboasary ny ankamaroany ka lavitra ny toeram-piasana. Ho fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpampianatra, nisy ny fanofanana nampitomboana fahalalana amin’ny fahaiza-mampianatra niaraka amin’ny INFP tany Lanirano, Taolagnaro ny volana mey 2017. Nizaran’ny Unicef fitaovana koa izy ireo nandritra ny fiofanana.
Nanomboka ny taona 2017, nahatratra 201 ny mpampianatra amin’ny CEG nisitraka izany. Nozaraina tamin’izy ireo ny fahalalana momba ny etika tokony hananan’ny mpampianatra any an-dakilasy, ny zon’ny ankizy, ny fampiasana ny torolalana sy takelaka fampianarana ahitana ny lesona isaky ny taranja. “Maivana kokoa ny fampianarana taorian’ny fanofanana sady nahazo fitaovana izahay”, hoy i Claudia, mpampianatra ny taranja malagasy ao amin’ny CEG.
Nahitana fiakarany ny tahan’ny fahafahana BEPC tao anatin’ny roa taona nisokafan’ny kilasy 3ème. Nisondrotra ho 60% izany ny taona 2018 raha 33% monja ny taona 2017.